Thatha ithuba leentsuku zokugqibela ukuthenga iMac yeklasi kwaye uthathe ezinye ukubetha | Ndisuka mac
Thatha ithuba leentsuku zokugqibela ukuthenga iMac eklasini kwaye uthathe ezinye ukubetha
Njengesiqhelo, iApple isungula amaphulo ahlukeneyo unyaka wonke ukukhuthaza amanqaku, kwaye ke, gcina abathengi bejonga uphawu. Kwinyanga enye ngaphambi kokuqala kweklasi, iphulo liyaqala. Kwimeko yase-US, iphulo lecandelo lezemfundo lika-Apple laqala ngoJulayi, xa iiklasi zaqala kwangoko. Kwelinye icala, eSpain sasinokuyibona, ngasekupheleni kuka-Agasti.
Nangona kunjalo, eli phulo lifana isaphulelo esibalulekileyo kunye nesipho senqaku. Ngesi sihlandlo, sine isipho se-Beats headphones. Kuxhomekeka kwinto ekhethiweyo ye-Apple, siya kufikelela kuhlobo lwesipho okanye olunye.
Khawuleza ngoko Iphulo lika-Apple liphela ngo-Okthobha u-2 olandelayo eSpain. Kude kube ngulo mhla thina Singazuza kwizaphulelo ezibalulekileyo ekuthengeni iMac, i-iPad, kunye nezinye iimveliso zohlobo, phakathi kwazo esizifumanayo Ii-AirPods okanye ikhibhodi yomlingo ngamaxabiso asezantsi ngokunxulumene nomthengi oqhelekileyo.
Ukongeza kwisaphulelo esisetyenzisiweyo kwicandelo lezemfundo, ezahlula phakathi kwe 329 € ukuba unomdla wokuthenga iMac kwaye 71 € kwimeko ye- xa uthenga i-iPad. Ungathatha ithuba lokususa eso sixhobo ungasasisebenzisiyo kwaye uyonqena ukusithengisa nakweyiphi na enye inkonzo yentengiso yesibini. Kwimeko apho, iApple iyakuxabisa izixhobo zakho ngokusekwe kwimodeli ye-Mac oyizisayo kunye nobudala bayo kunye nenqanaba lolondolozo. I-Apple ibeka endaweni yakho uluhlu olubanzi lweenkonzo, ukwenza ukuthengwa kube lula, ngakumbi ukuba awunayo iVenkile yeApple kufutshane nalapho uhlala khona. Ukwenza oku, kubeka ezandleni zakho, umgca wetyala kunye nokuhanjiswa kwiiyure ezingama-48 ekhaya lakho.
Izaphulelo kwicandelo lezemfundo zezi iyafumaneka kubafundi ababhalise okanye abamkelwe eyunivesithi, abazali abathengela abantwana babo eyunivesithi kunye nokufundisa okanye abasebenzi bezolawulo kulo naliphi na iziko lemfundo. Ukuba uphakathi kwabo, lisebenzise eli thuba, kuba alidli ngokuziphinda unyaka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Thatha ithuba leentsuku zokugqibela ukuthenga iMac eklasini kwaye uthathe ezinye ukubetha
Iinguqu zokugqibela ze-tvOS 11 kunye ne-watchOS 4 ngoku ziyafumaneka